Huawei Mate 30 iyo 30 Pro: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah | War gadget
Toddobaadyo ka hor sumadda lafteeda ayaa si rasmi ah u xaqiijisay. Maanta, Sebtember 19 Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay. Munaasabad soo bandhigid ah ayaa lagu qabtay magaalada Munich taas oo aan ku baranay dhamaadka-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha. A-dhamaadka sare awood badan oo loogu talagalay inuu noqdo guul cusub soo saaraha.
Toddobaadyadan waxaa jiray noocyo kala duwan oo xan ah iyo faallooyin ku saabsan Huawei Mate 30, laakiin ugu dambeyntii maanta waxaan awoodnay inaan ogaano noocyadan cusub ee shirkadda si rasmi ah. Sida ay u dhacdo jiil kasta, shirkaddu waxay nooga tagaysaa horumar muuqdaMar labaad goobta sawir qaadista waxaa ka jira isbadalo.
Naqshadeynta labadan taleefan ayaa weli aad isugu eg ilaa sanadkii hore. Nooc aad u qadiimi ah, oo caan ah ayaa loo isticmaalay, in kastoo markan uu ka khafiifsan yahay sanadkii hore, marka laga hadlayo Mate 30 Pro. Markaa kama badna shaashadda taleefanka si aad u badan oo macno ahaan ah. Qaabka caadiga ah wuxuu adeegsadaa qaanso u dhiganta hal dhibic biyo ah. Meesha aad ka arki karto isbeddelo badan ayaa ku yaal dhabarka labada taleefan, iyadoo la adeegsanayo sida kamaradaha ay u yaalliin
1 Caddaymaha Huawei Mate 30
2 Caddaymaha Huawei Mate 30 Pro
Caddaymaha Huawei Mate 30
Marka hore waxaan diiradda saaraynaan taleefanka magaca u siiya noocyadan cusub sare ee sumadda Shiinaha. Waa moodel wanaagsan, oo leh qeexitaanno wanaagsan oo buuxiya wax kasta oo aan maanta ka dalbanno heer-sare. Wax cabasho ah kama lahan arintan. Feejignaan gaar ah ayaa la siiyay sawir qaadashada taleefanka, sida aan ku aragno moodelladan heer sare ah ee nooca Shiinaha ah. Kuwani waa qeexitaannada buuxa ee Huawei Mate 30:
Faahfaahinta farsamada Huawei Mate 30
Tusaale Mate 30
Gacaliye Kirin 990
Tilmaamo kale Dareemida faraha faraha
Caddaymaha Huawei Mate 30 Pro
Second waxaan ka heli taleefanka ugu awoodda badan ee dhamaadka sare sare ee sumadda Shiinaha. Huawei Mate 30 Pro wuxuu leeyahay wax walba oo ka mid ah taleefannada ugu iibsiga wanaagsan bilaha soo socda. Waxaa loo soo bandhigay sidii taleefan awood leh, oo leh astaamo farsamo oo wanaagsan, iyo kaamirooyin aad u wanaagsan. Dhamaad sare oo ku siin kara dagaal badan suuqa. Kuwani waa qeexitaannadooda oo dhammaystiran, oo ay xaqiijisay shirkadda lafteeda:
Faahfaahinta farsamada Huawei Mate 30 Pro
Tusaale Mate 30 Pro
Nidaamka hawlgalka Ilaha furan ee Android ee leh EMUI 10 iyo Huawei Mobile Services
Screen OLED 6.53 injiin cabir ahaan
Kaamirada gadaal 40 MP + 40 MP + 8 MP + 3D qoto dheer dareeraha
Xuduudaha kala duwan 5G / WiFi 802.11 ac / Bluetooth / USB-C / Dual SIM / GPS / GLONASS
Tilmaamo kale Shaashada sawirka shaashadda / NFC / 3D aqoonsiga wajiga
Batariga 4.500 mAh oo leh 40 W lacag deg deg ah iyo wireless wireless
Huawei Mate 30 wuxuu adeegsadaa dareemayaal seddex geesood ah iyo qaabka Pro wuxuu u adeegsadaa afar kamarad kiiskan. Dareemayaasha la adeegsaday ayaa la hagaajiyay. Marka lagu daro lahaanshaha horumar muuqda oo ku saabsan duubista fiidiyowga.Gaar ahaan duubista dhaqdhaqaaqa aad u gaabiska ah, iyadoo ay suurtagal tahay in lagu duubo 7680 fps oo leh qaabkan Pro.Sidan oo kale waxay ka sarreysaa dhammaan tartamayaasheeda, iyadoo mar kale muujineysa in shirkaddu tahay tixraac xagga sawirka ee taleefanka ah.
Marka lagu daro inuu naga tago dhammaan xogta ku saabsan qeexitaankiisa, nooca Shiinaha ayaa sidoo kale la wadaagay xogta bilowga oo ka mid ah Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro suuqa. Kuwani waa laba taleefan oo loo yeedhay si loo abuuro xiiso badan suuqa. Markaa in la ogaado goorta la bilaabayo iyo inta ay ku kacayaan waa macluumaad si xiiso leh loo sugayo. Labada taleefan ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigi doonaa rubuc afraad ee sanadkan. Taariikhaha u dhexeeya dhammaadka Oktoobar ilaa Nofeembar ayaa la tixgelinayaa, laakiin waxaa la filayaa in dhammaan xogta la soo bandhigi doono toddobaadyo gudahood. Marka wax badan ayaan kuu sheegi doonaa marka ay jiraan xog ku saabsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro: Dhamaadka-dhamaadka waa la cusbooneysiiyay
Sida loo rakibo iOS 13 ama iPadOS iPhone ama iPad